Thierry Henry Oo Shaaca Ka Qaaday Wax La Yaab Leh Oo Uu Dareemay 10-kii Daqiiqo Ee Ugu Horaysay Kulankii Ay United Guusha Kala Kulantay West Brom – Kooxda.com
Home 2018 April Ingiriiska, Wararka Maanta Thierry Henry Oo Shaaca Ka Qaaday Wax La Yaab Leh Oo Uu Dareemay 10-kii Daqiiqo Ee Ugu Horaysay Kulankii Ay United Guusha Kala Kulantay West Brom
Thierry Henry Oo Shaaca Ka Qaaday Wax La Yaab Leh Oo Uu Dareemay 10-kii Daqiiqo Ee Ugu Horaysay Kulankii Ay United Guusha Kala Kulantay West Brom
Halyeeyga Kooxda Arsenal ee Thierry Henry ayaa sheegay in uu dareemay wax la yaab leh 10-kii daqiiqo ee ugu horeeyay kulankii ay United guuldarada kala kulantay kooxda West Brom.
Thierry Henry ayaa lahaa dareen u sheegaya in gool laga dhalin doono kooxda Man United waliba la kulmi doonto guuldaro gacanta u galisa horyaalka dhigeeda Man City.
Henry ayaa sidoo kale ka hadlay qaab ciyaareedkii liitay ee Paul Pogba kulankii xalay kadib markii uu xiddigu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kulankii ay United guusha soo laabashada leh ka gaartay City.
“Isla markii uu bilaabmay kulanku, waxa jiray wax la yaab leh, jawiga garoonka, kooxda laftooda waxa ay ahayd wax la yaab leh in aynu aragno marka loo bar-bar dhigo wixii aynu aragnay todobaadkii hore”ayuu Henry u sheegay Sky Sports.
“Sida ay u galeen kulanka iyo Rabitaankooda, waxa la i waydiiyay in uu Pogba qaban karo shaqadii todobaadkii hore oo kale waxana aan ku jawaabay, Maya”.
40 jirka reer France ayaa hadalkiisa ku sii daray” Jose Mourinho waxa uu isku dayay in uu dajiyo xiddigihiisa waxana uu leeyahay khibrad ku filan waliba uu ku sii arkay natiijada ka hor inta uuna arkin”.
“Waxa uu dareemay in uu u baahan yahay in uu la hadlo xiddigihiisa intii ay ciyaartu socotay”.